Generator Janjeeri-wareeg: Samee Saamaynta Janjeeri-wareeg ah in Click ah
> Resource > Video > Sida loo abuuro Saamaynta Janjeeri-wareeg ah in Click ah
Ma doonaysaa in aad bixiso sawir / video eegno gaar ah oo leh saamayn ah usii-wareeg ah? Guud ahaan, saamaynta ay usii-wareeg lagu gaari karaa in midkood la isticmaalayo gashto usii-wareeg ah ama gaare Janjeeri-wareeg ah. Tutorial waxay diiradda saari doontaa dambaysta ah: si sahal ah u beddesho hadda digital photos / videos galay qabow clips style Ghadafi isticmaalaya matoor Janjeeri-wareeg ah. Halkan, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) si weyn lagu talinayaa. Waa codsiga tafatir ah feature-hodan sawir / video in qof kasta isticmaali kartaa. Hadda download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya oo ay bilowdo inay sameeyaan saamayn ah usii-wareeg ah in tallaabooyin fudud yar.
1 dejinta aad sawiro digital ah ama video clips
Riix dejinta ama jiita sawirada / videos on wadid aad u adag si toos ah barnaamijka. Tan iyo ku dhowaad dhammaan qaabab loo jecel yahay waxaa taageera, aad si habsami leh ku shuban kartaa dhammaan faylasha aad heleysid inta aad ku haynta tayada asalka ah. Talooyin: Si loo kobciyo ururinta sawir aad, waxaad qaadan kartaa snapshots clips aad jeceshahay si xor ah u furmo previewing.
Hadda, aad arki doonaa dhammaan faylasha laga keeno oo muujinaysa sida thumbnails in ay leeg- bidix. Jiid iyo iyaga iska Timeline ah.
2 Abuur saamayn Janjeeri-wareeg ah in click ah
Midig u guji video clip ama sawir ku Timeline ah, iyo dooro "Power Tool" in menu pop-up ah. Markaad u timaadaan inaad "Power Tool" Window ah, sax "Codso Janjeeri-wareejin si clip ah" checkbox. Markaas, qabsato size of aagga focal iyo goobta sawirka. Hadda oo kaliya aag yar oo ah video jir ah oo dhammuna wuxuu noqon doonaa in diiradda iyo degaanka ku hareereysan waxaa lagu darsan doonaa. Waxaa Play in ku eegaan saameynta-waqtiga dhabta ah. Marka wax kasta oo xaq u tagaa, guji "OK" inuu ku soo laabto uu furmo suuqa hoose.
3 Tweak saamayn Janjeeri-shaqada (optional)
Intaa waxaa dheer, in aad tweak karo midabada, saturation, bedelkeeda, iwm in ay buunbuuniyaan midabo dabiiciga ah, samaynta video aad / sawir yar oo dheeraad ah cad. Si aad u hesho guddi tafatir ah, waxaad xaq u riixi kartaa clip ama ku dhacay "Edit" icon ee birta ku qalab dhexe. Daaqadda pop-up, dhalaalka, bedelkeeda, cado, iwm oo dhan waa xor ah hagaajin karo.
Marka aad ku qanacsan saamayn-waqtiga dhabta ah, guji Abuur si ay u dhoofiyaan. In uu furmo suuqa wax soo saarka, xulo qaab video sida wmv, MOV, AVI, MKV, MP4, iwm si loo badbaadiyo on your computer. Sidoo kale, waxaad dooran kartaa inaad la wadaagto abuurkiinna gal YouTube, Facebook, Twitter si toos ah uga this gaare Janjeeri-wareeg.
Talooyin: Waxaad sidoo kale soo dhoofsadaan karo files audio sida MP3, AAC, WMA, iwm si codsan music asalka ah , ama u qoraan voiceover ah in la siiyo Sheeko la.